News | 33 kg gold
News | Tag: 33 kg gold
३३ किलो सुन तस्करीमा तानिएका सुब्बाविरुद्ध १४ करोडको ‘अकुत’ मुद्दा
काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नायब सुब्बा श्यामकृष्ण च्वामु श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । ३३ किलो सुन तस्करीमा तानिएका उनलाई साढे १४ करोडभन्दा बढी ‘अकुत’ सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनी रेडियो अपरेटर (सुनको जाँच गर्ने मेसिन चलाउने) हुन् ।
साढे ३३ किलो सुनकाण्डः उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश पनि तानिए
काठमाडौँ । सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दा पेशी व्यवस्थापनमा ‘कैफियत’ भेटेपछि न्यायपरिषद्ले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेललाई समेत कारबाही स्वरूप काठमाडौँ तानेको छ।
विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी अभियोगमा थुनामा रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्रीलाई थुनामै राख्न बिहीबार आदेश दिएको छ । उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश डा कुलरत्न भुर्तेल र न्यायाधीश जनक पाण्डेको इजलासले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक खत्री र नेपाल एयरलायन्सका कर्मचारी अमरमान डङ्गोललाई थुनामै राख्न आदेश दिएको हो ।
खोइ कोलकतामा समातिएको ३३ किलो सुन ?
काठमाडौँ । मंसिर २१ गते कोलकाताको धनकुनीमा ३३ किलो सुन र दुई नेपाली समातिए। त्यो त्रिभुवन विमानस्थलबाट गायब भएकै ३३ किलो सुन भएको र ती व्यक्ति गोरेकै ग्याङका सदस्य भएको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको छ। तर सुन फिर्ता आउने त कुरै भएन, तस्करी अनुसन्धान गर्न पनि नेपालले दिल्लीमार्फत कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने भएको छ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट हराएको ३३ किलो सुन भारतमा भेटियो
काठमाडौँ । भारतको कोलकाता–दिल्ली राजमार्गस्थित धनकुनी क्षेत्रबाट हराएको ३३ किलो सुन बरामद भएको छ । भारतीय प्रहरी र त्यहाँको राजस्व अनुसन्धान विभाग टोलीले गत शुक्रबार उक्त सुन बराबद गरेको हो । सुन तस्करीको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिका संयोजक तथा सहसचिव ईश्वरराज पौडेलले उक्त कुराको जानकारी दिएका हुन् ।
सुन तस्करी काण्ड किन भयो गुपचुप ?
काठमाडौं । गृहमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर पौडेल संयोजकत्वमा गठित ३३ किलो सुन छानबिन समितिले दिवेश लोहनीसहितका प्रहरी अधिकृत र केही ब्यापारीलाई पक्राउ गर्नेबाहेक कुनै उल्लेख्य काम नगरी बिदा भइसकेको छ ।
साढे ३३ किलो सुन तस्करी मुद्दामा विवाद
विराटनगर । साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दाको प्रक्रियालाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
३३ किलो सुन काण्डको अनुसन्धानको दायरामा ३ सय जना, केही नेता पनि
साढे ३३ किलो सुन प्रकरणका नाइके गोरे डिप्रेसनमा
काठमाडौं । काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कारागारको गोलघरमा कैद सजाय भोगिरहेका चूडामणि उप्रेती गोरे केही समयदेखि डिप्रेसनमा गएका छन् । कारागार व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गोरे कसैसँग नबोल्ने, बोलिहाले पनि बेसुरको कुरा गर्ने, डराएजस्तो गर्ने, एक्लै बस्ने, अनायसै टोलाउने र आँखाबाट आँसु झार्नेजस्ता व्यवहार देखाउने गरेका छन् ।